Izinqubomgomo Zesikole - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Konke okudingeka ukwazi
Ku-BLI, sisebenzisa inqubomgomo yesiNgisi noma eyesiFulentshi kuphela. Le nqubomgomo isungulwe ukukusiza ukuthi wandise umkhuba wakho wolimi lwesiNgisi noma lwesiFulentshi phakathi kwezifundo zakho eCanada.
Ukukusiza uthuthukise ngempela izinga lakho lokuphamba kahle, uzolindeleka ukuthi uxhumana kuphela ngolimi olufundayo ngaso sonke isikhathi ngenkathi use-BLI.
Uma uphula inqubomgomo, uzothola inhlawulo:
Icala lokuqala Uzothola ikhadi lesexwayiso
Icala lesibili Uzoamiswa okwesikhashana eBLI usuku olulodwa futhi uzoqoshwa njengongekho
Icala lesithathu Uzoamiswa okwesikhashana eBli izinsuku ezintathu futhi uzoqoshwa njengongekho. Uzodinga ukuhlangana nomxhumanisi wohlelo
Icala lesine Uzoamiswa okwesikhashana eBli izinsuku ezinhlanu futhi uzoqoshwa njengongekho. Uzodinga ukuhlangana nomxhumanisi wohlelo
Ukona kwesihlanu Uzomiswa esikoleni ngeseshini eyodwa noma okufanayo
Ukuze usisize impela uthuthukise izinga lakho lokuphamba kahle, uzolindeleka ukuthi uxhumana kuphela ngolimi olufundayo ngaso sonke isikhathi ngenkathi use-BLI.
Ukubambezeleka nokungabikho emsebenzini
I-BLI ilindele ukuthi abafundi babe sesikhathini emakilasini abo. Ukubakhona kanye nokufika ngesikhathi kubalulekile kakhulu entuthukweni yakho yezifundo. Silindele ukuthi uye amakilasi akho njalo futhi ufike ngesikhathi ukuze ugweme ukuphazamiseka ekilasini futhi uqiniseke ukuthi awuphuthelwa yiluphi ulwazi olubalulekile.
· Uma ufika sekwephuzile, bonisa inhlonipho uthisha wakho kanye nabo ofunda nabo ngokungena ekilasini futhi uthathe isihlalo sakho buthule
· Qaphela ukuthi uma ufika "NGESIKHATHI SOKUQEDA" (imizuzu eyi-15 edlule isikhathi sakho sokuqala sekilasi) uthisha wakho angakunqabela ukufinyelela ekilasini
· Uma kunesimo esithile esikhethekile esikwenza ungakwazi ukufika ngesikhathi kaningi, khuluma nomxhumanisi wezemfundo ngakho
· Othisha be-BLI bagcina umlando wababekhona ekilasini lakho nsuku zonke
· Uma ungekho ngaphezu kwama-20% kuseshini, ngeke uthole amakhredithi enkambo oyenzayo
· Uma ugula noma ufisa ukukwazisa ngokungatholakali kwakho sicela ugcwalise ifomu lesaziso lokungabikho.
· Uma usephuze kathathu ekilasini elilodwa, kuyalingana nokungabikhona. Uma uhambela ngaphansi kwama-80%, ngeke usithole isitifiketi.
· Unokubekezelelwa imizuzu engu-5
· Uma ufika phakathi kwemizuzu engu-5 no-15 edlule isikhathi sakho sokuqala sekilasi, uzomakwa sekwephuzile
· Uma ufika imizuzu eyi-15 kudlule isikhathi sokuqala kwekilasi lakho, uzomakwa njengongekho
· Uma umakwe sekilasini izikhathi ezintathu, kuzolingana nokungabi bikho
· Uma uya ngaphansi kwama-80% eklasi lakho, ngeke usithole isitifiketi
Abafundi abaza amaviki angama-24 nangaphezulu bavunyelwe ukucela ikhefu lokungabikho. Leli khefu lokungabi khona alikwazi ukudlula amasonto amane. Uma unikezwa isikhathi sekhefu, amakilasi akho ayohlehliswa.
Uma ucela ikhefu lokungabikho, kufanele ngabe usuqede amaviki awu-12 wokufunda. Uma uhambela kwelinye izwe, kufanele ube ne-visa evumelekile.
Isicelo sekhefu sokuya emsebenzini singaphansi kokuvunywa ngumnyango wezezifundo. I-BLI ayinasibopho sezinhlelo zokuhamba ozenzayo uma isicelo sakho singavunyelwe.
Ungacela ikhefu elilodwa lokungabikho.
Ukucela ikhefu lokungabikho sicela ugcwalise okwethu ifomu lesicelo seholide.
Yize lesi yisimo esingajwayelekile, uma unomuzwa wokuthi ikilasi obekwe kulo alikusizi ukuthuthukisa amakhono akho olimi noma uma linzima kakhulu, ungacela ushintsho lwekilasi. Ukuze wenze njalo, udinga ukuqeda i-BLI ifomu lokuguqulwa kwesicelo seklasi, Uma sesitholile umxhumanisi wezezifundo uzoxhumana nawe ukuze wenze isikhathi sokuzama ukuqonda isimo kangcono. Ukushintshwa kwamakilasi kungenzeka kuphela ngesonto lakho lokuqala lwamakilasi. Uzoxoxa nothisha bakho futhi akunikeze isinqumo sakhe sokugcina kungakapheli amahora angama-24.
Ungathuthukisa kepha unganciphisi uhlelo lwakho. Uma unentshisekelo yokuthatha amakhono noma ikilasi lokukhetha lokukhuluma nomxhumanisi wokufunda ukuze ubone ukuthi ngabe kukhona isikhala esikhona esifundweni ofuna ukusithatha. Umxhumanisi wezemfundo uzokutshela ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzilandele.
1) Ukucatshangelwa: Uma ucubungula ukulethwa kwezinhlelo kanye nokunye ukucatshangelwa okuhle nokubalulekile, irisidi nokwanela kwalo kwamukelwa yibo bonke abaFundi abakhona njengamanje;
2) “Ukuchitheka” ngezinhloso zale nkontileka, ngokujwayelekile kuzosho amazwi amabi mayelana neSikhungo esenziwa ngamabomu noma ngendelelo (kufaka phakathi bonke labo bantu abentiwe ngaphansi kwale nqubomgomo) noma ngaphandle kokuthatha izinyathelo ezifanele zokuqinisekisa iqiniso lalokho okushiwo ngaphambili esezenzile.
3) Uboshiwe: Kuncike kuphela emthethweni waseCanada ophethwe kunoma yisiphi isifundazwe (kubandakanya kepha ngaphandle komkhawulo umthetho ovumayo olawula izikole ezizimele noma izikhungo kanye neCanada Charter of rights and Freeoms uma / lapho kubanjelwe khona), bonke abafundi bazoboshwa yilokhu okungekho -Inqubomgomo yokuhlonza. Ukuhambisana nenqubomgomo yisimo sokubhalisa.
4) Inhloso yenqubomgomo: Isikhungo sinedumela lobuhle. Lesi sikhungo siyisikhungo esizimele esisebenza ezindaweni eziningi esifundazweni saseQuebec, futhi sizibophezele ukugcina sisezingeni eliphakeme ekufundiseni nasekuqinisekiseni ukuthi inani le-BLI, Bouchereau Lingua International liyaqhubeka liqinile.
5) Imithombo yezokuxhumana: Ngokuthandwa kwemithombo yezokuxhumana (Facebook, YouTube, Twitter, njll) abafundi, kanye ne-alumni yeSikhungo nabo bonke ababambisene nabo, bangakwazi ukuxhumana ngendlela abangakaze benze ngayo phambilini. Isikhungo sithokozela iqiniso lokuthi abafundi kanye ne-alumni banamathuba amasha wokuxhumana ngokuqasha emisebenzini abayikhethile, futhi bangaxhumana nabanye emphakathini. Isikhungo sinethemba lokuthi lokhu kuzoba nomthelela ekuhlonipheni kweSikhungo isikhathi eside ezimakethe.
I-6) Idumela liyindlela yomgwaqo emibili: Abafundi bathola inzuzo enkulu ngokuba yi-alumnus ye-BLI, Bouchereau Lingua International. Ngasikhathi sinye, i-Institution ekugcineni "ichazwa" "yikhwalithi" yabaqeqetshi bayo, okusho ukuthi lapho begcina besebenza khona, ukuthi bavivinya kanjani amakhono abo emsebenzini, nokuthi bayawuthokozela yini umsebenzi abawukhethile. Isikhungo kanye nabafundi baso banesifiso esifanayo sokugcina nokuvikela ubuqotho kanye nesithombe seSikhungo nabo bonke ababambisene naso.
7) Ukuzibophezela okucacile komfundi: Ngomqondo okungenhla, abafundi kufanele bathembise ukwenza lokhu okulandelayo:
a) Yenqaba ukwenza noma yisiphi isitatimende somphakathi noma izitatimende, ngokusebenzisa abezindaba zezenhlalo noma ngenye indlela, ngeSikhungo noma enye yezinhlangano ezihambisana nayo, ezingathathwa njengezinganembile, ezigxeka ngokungafanele noma ezihlambalazayo, noma ezinesizungu, noma ezingathinta ukulimaza ngokungafanele idumela leSikhungo noma yiziphi izinhlangano ezihambisana nayo;
b) Yenqaba ukwenza noma yisiphi isitatimende somphakathi noma izitatimende, ngokusebenzisa imidiya yezenhlalo noma ngenye indlela, engathathwa njengengalungile, egxeka ngokungafanele noma edelelayo, noma enesizungu, noma engahle ilimaze ngokungafanele idumela lomunye umfundi (futhi ngaphandle komkhawulo) umfundi osekhona noma owake waba ngumfundi, u-alumni, ofundisayo, noma oyilungu le-Institution;
c) Bika esikhungweni ngokushesha, ukushicilelwa kwanoma yisiphi isitatimende noma isitatimende esibucayi, noma isitatimende esidabukisayo, noma isitatimende / amasu okungavimbela ukulimaza kabi isithunzi salesi Sikhungo noma esinye isisebenzi esisebenzisana naye, ngemidiya yezenhlalo noma ngenye indlela. Ukubikwa okunjalo kuzofaka umbhali noma abalobi balolo shicilelo, nakho konke okunye imininingwane eyaziwayo kumfundi obikayo;
d) Bika esikhungweni ngokushesha, ukushicilelwa kwanoma isiphi isitatimende esingalungile, esidabukisayo noma esidelelayo, noma isitatimende esikhulayo sokulimaza ngokungafanele idumela lomunye (futhi ngaphandle komkhawulo) umfundi oke waba khona noma owake waba yilungu lesikole, u-alumni, ofundisayo, noma oyilungu lesikhungo noma yiziphi izinkampani ezihambisana nayo. Ukubika okunjalo kuzofaka umbhali noma ababhali bokuthi kushicilelwe, nakho konke okunye imininingwane eyaziwayo kumfundi obikayo.
e) Yenqaba ukudicilela phansi iSikhungo noma ezinye izimbangi zayo nganoma yiluphi olunye uhlobo ezingabhekwa ngokufanelekile ukuze zilethe iSikhungo noma yiluphi uhlangothi lwezinhlangano zalo, futhi ngaphandle komkhawulo, ubuhlakani bayo, abasebenzi, abafundi noma ama-alumni, ukuze bahlambalaze;
f) Bazijwayeza ezinye izinqubomgomo ezibabopha ngenkathi abafundi, kubandakanya kepha ngaphandle komkhawulo, inqubomgomo yokulwa nokuxhashazwa / yokulwa nokuhlukunyezwa / inqubomgomo yokubandlululwa.
8) Isiyalo sokungathobeli umthetho: Isijeziso, kufaka phakathi ukuxoshwa noma ezinye izithiyo njengoba kufanele, kungahle kube ngenxa yokungalandelani kwale Nqubomgomo.
IBouchereau Lingua International (BLI) izimisele ukuthatha zonke izinyathelo ezifanele zokuqinisekisa ukuthi abafundi banethuba lokuphothula ngempumelelo izinhlelo zabo. Ngaphakathi kwalolu hlaka olujwayelekile, bonke abafundi baphathwa kahle nangokulinganayo. Abafundi abangayisekeli imigomo yemfundo yokuziphatha neyokuziphatha ye-BLI bona nezabafundi babo bangakhokhiswa inhlawulo, kuze kufinyelele nokubandakanya ukuxoshwa.
Ngokuvamile, i-BLI izozama ukuxazulula isimo ngaphandle kokuxoshwa. Izexwayiso ezikhulunywa ngomlomo, izixwayiso ezibhaliwe nokumiswa kungandulela lokhu kokugcina nokubaluleke kakhulu kwezenzo.
Lapho i-BLI ibona ubuqotho, ukuphepha noma inhlala-kahle yabafundi bayo, abasebenzi, amaklayenti noma ezinye izivakashi iba sengozini, ukuxoshwa kungahle kuvunyelwe ngokubona kwesikole nganoma yisiphi isikhathi lapho kuqhubeka inqubo.
1) Zonke izitshudeni kulindeleke ukuthi ziziphathe ngendlela enesizotha nenobungcweti.
2) Abafundi bangalengiswa noma baxoshwe / baxoshwe, kuya ngokuthi bunjani ubukhulu kanye / noma i-degree ye- “Ukungaziphathi” kwabo: Ukuziphatha gwenxa kuchazwa ngokuthi, futhi akunamkhawulo:
a) Ukuziphatha okuphazamisa noma nganoma iyiphi indlela ephathekayo kubeka engcupheni iSikole noma omunye wabafundi baso, kufaka phakathi ukuphathwa kohlelo (kufaka ngaphandle komkhawulo noma yisiphi isenzo noma isenzo sodlame esisongelwe, ukwehluleka ukusebenzisana nenqubomgomo yokufakwa noma yokuhlala yesikole )
b) ukusebenza kwabafundi okuletha ukujivazwa ngamazinga obuchwepheshe, ezemfundo noma wokuziphatha wesikole
c) ukwehluleka kwezemfundo
d) ukungahambi kahle okungaba khona okungaphansi kwezidingo zemvume yohlelo, noma ukubamba iqhaza okungafanele (ngaphandle kwesizathu sokwelashwa esibangela isidingo esingokomthetho sokuhlala)
e) ukuziphatha okuphazamisa amalungelo asemthethweni abanye abafundi kanye / noma isikole, abasebenzi baso, abenzeli, noma abasebenzi
f) ukwephulwa okuphindiwe kwezinqubomgomo zeSikole njengoba kubekiwe kulesi Sivumelwano Sokubhaliswa Kwabafundi futhi kuchitshiyelwa isikhathi nesikhathi njengoba iSikole sibona sidingeka, noma ngokulandela imithetho kanye / noma imithethonqubo esebenzayo;
g) ukwehluleka ukukhokha imali edingekayo njengoba kubekiwe esivumelwaneni esisayiniwe somfundi;
h) ukwephulwa kwezidingo zokusebenza noma eminye imithetho kanye / noma imihlahlandlela njengoba ingasebenza kumfundi; futhi
i) ukwabiwa kwezinsizakusebenza ngaphakathi kwekhempasi kanye nakubafundi beSikole ezingavunyelwanga yiSikole (njengezincwajana, izikhangiso ezivela eceleni, izinto zokwazisa, izinto zezombusazwe noma ezenkolo, njll.)
3) Ukwehluleka okuphindaphindiwe ukulandela izinqubomgomo zeSikole, ezingashintshwa ngezikhathi ezithile njengoba iSikole sibona kufanelekile noma ngokuhambisana nemithetho esebenzayo kanye / noma imigomo, kuyizizathu zokuxoshwa / ukuhoxiswa. Qaphela ukuthi ukwephula izinqubomgomo zezikole ezithile kungaholela ekuxosheni / ekuxosheni ngokushesha kulolo hlelo ngokuya ngobucayi bokwephulwa (bona isigaba 5 ngezansi).
4) Isikole, ngokubona kwaso sodwa futhi siyahambisana nemithetho esebenzayo kanye / noma izimiso, singacubungula ukumiswa ngaphambi kokuxoshwa / ukuxoshwa komfundi.
5) Izinhlobo ezithile zokungaziphathi kahle zizoholela ekuxoshweni noma ekuxosheni lowo mfundi ngesisekelo “sokungabekezeleli” ngokuphelele. Ukuziphatha okunjalo kufaka phakathi, kepha ngaphandle komkhawulo
a) Ukuphula izidakamizwa ze-BLI kanye nenqubomgomo yotshwala
b) Ukuziphatha okunobudlova kanye / noma okusongela omunye umfundi, isisebenzi, ilungu lobuhlakani, noma isivakashi esisekhampasi
c) Ukungathembeki ezifundweni zomfundi eziphathelene nokuhlolwa noma ubufakazi, noma noma ikuphi ukungathembeki okuya ekuthembekeni kweSikole njengokusebenzisana okungavunyelwanga, ukushintshwa kwamarekhodi, ukufumbathisa, noma olunye uhlobo lokuqokwa okungafanele
6) Ukuhlukunyezwa noma Ukubandlululwa - i-BLI, iBouchereau Lingua International ayikuvumeli ukuhlukunyezwa noma ukucwaswa kwanoma yimuphi umfundi, abasebenzi, abasebenzi, noma ama-ejenti. Abafundi abazimbandakanya nokuhlukumeza noma ukubandlulula bangaphansi kophenyo olusamisiwe olusamile. Noma yimuphi umfundi othathwe yi-BLI, abaphenyi baseBouchereau Lingua International njengabenze umsebenzi wokuhlukumeza noma wokubandlulula okuphikisana neminye imithetho nemigomo esebenzayo bangaxoshwa noma baxoshwe ngokushesha. Ekunqumeni ukuthi yini okubandakanya ukuhlukunyezwa noma ukubandlululwa, i-BLI ibhekisela ku-The Quebec Charter of Human Rights and Freedoms.
7) Abafundi abathi ngezenzo noma ngokunganaki nganoma iyiphi indlela babeke engcupheni ukuphepha kwabo noma abanye bangaxoshwa.
8) Abafundi abalimaza, bantshontshe futhi basebenzise kabi impahla bangase baxoshwe futhi kuzodingeka benze ukubuyiselwa imali ukuze basebenzise noma balungise ngokuphelele impahla.
9) Abafundi abaphula umthetho wokuziphatha bangamiswa noma baxoshwe. Ngisho noma ukwephulwa komthetho kungenawo amandla okulimaza abantu noma impahla, i-BLI ingaxosha umfundi othole ukumiswa ngenxa yokwehluleka ukuthobela futhi kusukela lapho wephule noma yimiphi imigomo yekhodi yokuziphatha ye-BLI
10) Ukubuyiselwa kwemali kuzolawulwa ngokuhlinzekwa kwale nkontileka kanye nemithetho esebenzayo kanye / noma izimiso njengoba kubekiwe. Kodwa-ke, lapho i-BLI, iBouchereau Lingua International ingenasidingo esingokomthetho / isibopho sokubuyisa imali yokufunda noma enye ingxenye yokufundiswa kwesitshudeni kunoma yimuphi umfundi oxoshiwe (noma emisiwe, lapho ukumiswa kukade kwanele ukuthi umfundi alahlekelwe inani elibalulekile yesikhathi noma ithuba elalingasetshenziswe ngenye indlela ekufundeni), i-BLI, iBouchereau Lingua International ngeke ibe nesibopho sokubuyiselwa kwemali noma enye ingxenye yezifundo zalowo mfundi
11) Isinqumo sokumiswa noma sokuxoshwa / sokuxoshwa sizorekhodwa kwirekhodi lomfundi lokufunda nokubhaliwe
12) Abafundi abazoxoshwa nganoma yisiphi isizathu bazokwaziswa ngokubhala, kungaba nge-imeyili, incwadi elethwe ngesandla noma ngeposi elibhalisiwe. I-BLI ayinasibopho sokungalethi ‐ ngeposi elibhalisiwe uma umfundi enganikanga ikheli elivumelekile lokuhlala. Isaziso sizoqukethe incazelo yesisekelo sokuxoshwa kanye nosuku lokuqala ukusebenza. Abafundi abaxoshwa abaphikisana namaqiniso okuxoshwa kufanele banxuse isinqumo kungakapheli izinsuku ezintathu zesaziso kulandela inqubo yezikhalazo yeBLI enikezwe umfundi futhi inikeze ubufakazi obanele bokusekela isikhalazo. Abafundi abafaka isikhalazo futhi abangaphumeleli bathathwa njengekhishwa kwi-BLI
13) Inqubo yokudlulisa izikhalazo: Abafundi abaxoshiwe abaphikisana namaqiniso okuxoshwa / ukuxoshwa kumele bafake isikhalazo sabo neSikole kungakapheli izinsuku ezi-5 isaziso senziwe umfundi
Umfundi oxoshiwe unesibopho sokubuyisa noma iyiphi impahla yesikole eyakhe kungakapheli izinsuku eziyi-10 axoshwe futhi uzobanjwa ngokwezimali nganoma iyiphi impahla engabuyiswanga esimweni esihle
14) I-BLI, ngokubona kwayo kuphela, inganquma ukuthi inqubo yokubuyisela emuva iyahlelwa esikhundleni noma ihambisane nanoma yiziphi zalezi zindlela zokuziphatha eziyaphezulu ezifuna ukugxila kuzo. Inqubo yokubuyisela emuva yileyo egcizelela ukulungisa ukulimala okubangelwe noma okuvezwe wukungaziphathi kahle ngenqubo ebandakanya noma yokubambisana
Izidakamizwa, Izinto ezingekho emthethweni notshwala
· Ukusetshenziswa kwezidakamizwa notshwala akuvunyelwe esikoleni esikoleni.
· Ukusetshenziswa kweCannabis akuvunyelwe empahleni yesikole, emicimbini yesikole, imisebenzi noma uhambo nokuvakasha okukhishwe yinoma ngubani, akukho basebenzi noma abafundi.
· Noma yimuphi umfundi osemncane / osemncane ophethe, osebenzisa, othengisa noma odlulisa okusemthethweni (isb. Insangu, umuthi kadokotela, njll.) Noma izidakamizwa ezingekho emthethweni, i-paraphernalia yezidakamizwa, utshwala noma ugwayi nganoma isiphi isikhathi esempahla yesikole, noma ngaphansi kwegunya lesikole, ingaphansi kwesenzo esibi kakhulu sokuqondiswa kwezigwegwe, kubandakanya nokumiswa noma ukuxoshwa
· Izinqubomgomo zesikole ngezidakamizwa notshwala ziyasebenza nakuzo zonke izinkambo zabafundi ze-BLI kanye nemisebenzi. Isikole sinelungelo lokusesha noma yiziphi izimpahla zomfundi uma lowo mfundi esolwa ngokudla izidakamizwa noma izinto ezingekho emthethweni noma izinto esikoleni, ohambweni nasemisebenzini. Abafundi okukholakala ukuthi bangaphansi kwezezidakamizwa noma notshwala babhekana nemiphumela emibi, kufaka phakathi ukumiswa noma ukuxoshwa
Imithetho nezinkombandlela zasekhaya
Inhlonipho ibalulekile ekwenzeni ubudlelwane obuhle phakathi kwakho nomndeni wakho. Kubalulekile ukuthi uyihloniphe imithetho yabo.
Imithetho Yasekhaya Eyisisekelo
· Khombisa ukucabangela nokubekezelela ukusingatha amalungu omndeni
· Yazisa umndeni uma ungekho ekhaya uzodla, uzofika ekhaya kusihlwa, noma ulale ubusuku bonke
· Zihlanze ekhaya
· Gcina igumbi lakho lihlanzekile futhi lihlelekile
· Sicela ungagcini ukudla noma ukudla egumbini lakho
· Ungafaki amakamelo okuhlala, amagumbi angasese, noma igumbi lokugezela lapho kuhlala khona
· Musa ukuboleka imali kumalungu omndeni aphethe
· Gqoka njalo kahle futhi umbozwe uma kukhona amalungu omndeni owamukelayo
Umndeni wakho ophethe uzokwamukela ekhaya labo njengelungu lomndeni. Lokhu kusho ukuthi uzophathwa ngokungahlelekile kunokuba ubenokuthi "isivakashi". Imindeni iyakwazisa lapho unikela ngokusiza ekhaya ngokugcina igumbi lakho lihlanzekile nokwenza imisebenzi ejwayelekile, njengokubeka itafula, ukugeza izitsha, noma ukusiza ukulungisa isidlo sakusihlwa.
Njengelungu lomndeni, ungacelwa ukuba uzenzele ibhulakufesi nangelantshi, noma uzenzele impahla yakho yokuhlanza ngoba yilokhu okwenziwa ngamalungu omndeni amaningi.
Khumbula, awuhlali ehhotela lapho kunikelwa izinsizakusebenza.
Ukusiza ngale misebenzi kungakunikeza nethuba lokukhuluma nelungu lomndeni, ukuqhuba isiNgisi sakho, nokuba yingxenye yomndeni.
Izikhathi ezintathu zokudla ngosuku zivamile. Uma umndeni wakho ophethe kwenzeka ungekho lapho-ke ukudla kuzokwenzelwa wena ukuba ukwenze. Imvamisa, abafundi baseCanada balungiselela ukudla kwabo kwasemini ukuze baye esikoleni.
Phakathi nezinsuku, ibhulakufesi ukudla okusheshayo, okulula. Imindeni ingahle ilungiselele ukudla kwasekuseni ndawonye; lokhu kudla kungafaka isinkwa / ubhontshisi / izithelo, ujusi / ubisi, nezinhlamvu / amaqanda.
Isidlo sasemini singafaka amasandwich, imifino eluhlaza, amakhukhi, ubisi / ujusi nezithelo.
Ukudla kungafaka irayisi, inyama, imifino ephekiwe, isaladi kanye nocezu.
Umndeni wakho ophethe uzokubuza ukuthi yikuphi ukudla okuthandayo futhi ongakuthandiyo ukuze bazame ukufeza izidingo zakho. Kufanele wazise ngomndeni wakho ngenhlonipho uma ungakuthandi ukudla okuthile.
Imindeni eminingi yaseCanada inezilwane ezifuywayo ezinjengamakati nezinja. Imvamisa ihlanzekile futhi inomusa. Ngomndeni wakho ophethe, izilwane ezifuywayo ziyilungu lomndeni, ngakho-ke zikhululekile endlini. Yazisa umndeni uma ungafuni ukuthi lezi ezifuywayo zingene egumbini lakho.
Uzonikezwa isethi yezinkinobho zendlu ukuze ukwazi ukufinyelela kuyo nganoma yisiphi isikhathi. Sicela uqaphele kakhulu nabo. Uma kwenzeka ulahlekelwa yizo, yazisa umndeni wakho ngokushesha. Uzoba nesibopho sezindleko zokubuyisa ukhiye.
· Ungalandi noma ulayishe amanani amakhulu edatha • Ungalandi umculo noma amavidiyo.
· Khombisa indlela yokuziphatha nokuziphatha okuhle ekusebenziseni ubuchwepheshe.
· Cisha izibani lapho ungekho egumbini lakho
· Chitha isikhathi esilinganiselwe ku-kubhavu / eshawini
· Indlu igcina amazinga okushisa afudumele ebusika (degrees 20).
· Ungeqi ngokweqile amakamelo
· Phinda usebenzise kabusha. Izindlu zingaba nezindawo eziningi zokuphonsa udoti. Imvamisa iphepha, amathini namapulasitiki kufakwa ezitsheni ezihlukile. Umndeni wakho uzokuchazela lokhu.
· Thintana nomndeni owabamba ngaphambi kokusebenzisa izinto zasendlini noma izinto ezisetshenziswayo futhi uzisebenzise ngezindlela ezivunyelwe ngumndeni.
· Wubuyise ngokushesha umndeni uma udala noma yimuphi umonakalo e Bathroom yasendlini
· Musa ukudaya izinwele zakho ngaphakathi kwendlu, udayi uyalimaza futhi uthambisa konke okukuthintayo.
· Abesifazane akufanele baphonse izimbotshana zabo endlini yangasese, kodwa bazisonge ngezicubu bazilahle kude.
· Musa ukuphonsa izinto ethoyilethi ngaphandle kwephepha lasendlini yangasese
· Sicela uphonse iphepha lasendlini yangasese, hhayi kubhasikidi
· Sebenzisa ucingo isikhathi eside esifanele, cela imvume yokwenza izingcingo zebanga elide futhi wenze lezi zingcingo ziqoqe noma zisebenzisa ikhadi lokushaya. Siyazithengisa emnyangweni wemisebenzi.
· Unesibopho esingu-100% sokukhokhela noma yiziphi izingcingo zebanga elide ozenzayo
· Musa ukubeka noma ukwamukela izingcingo ngemuva kwe-10 pm
Uma ufuna ukumema umuntu endlini, kufanele uthole imvume emndenini wakho kuqala. Azikho izivakashi ezivunyelwe ukuhlala ubusuku obubodwa, ngaphandle kokuthi umndeni wakho ophethe ukukunikeza imvume yalokho.
Akufanele ukhokhele umndeni ngokuhlala kwakho ngqo. Kufanele ukhokhe i-BLI bese uMnyango we-BLI Homestay ukhokha umndeni. Inkokhelo ngayinye ihlanganisa amasonto ama-4 wokuhlala kanye nohlelo lokudla olukhethile. Yenza inkokhelo yakho okungenani amaviki ama-2 ngaphambi kokuphela kwesikhathi samasonto amane. Ngaphandle kwalokho, ngeke sikwazi ukukuqinisekisa ukuthi igumbi lakho lizogcinelwa lona.
Abafundi abahlala ekhaya laba nesikhathi sokuzivumelanisa nesonto elilodwa. Uma ngalesi sikhathi, ngesizathu esithile esizwakalayo, ungazizwa ukhululekile ezindlini ohlala kuzo, ungahanjiswa kwikhaya elihlukile ngaphandle kwenkokhiso, kodwa kufanele uxoxe ngenkinga yakho nomxhumanisi wakho wasekhaya kuqala. Sicela wenze lokhu ngesonto lakho lokuqala, ngoba uma ucela ushintsho ngemuva kwangoLwesihlanu, amasonto kufanele ukhokhele ushintsho.
Uyacelwa uqaphele ukuthi ngeke uhanjiswe ngokushesha. Ngemuva kokuhlaziya lesi simo, umxhumanisi wekhaya uzokhuluma nomndeni ukubona ukuthi yini le ekuhluphayo ingaxazululeka. Uma inkinga ingenaso isixazululo, umxhumanisi wekhaya uzokutshela izinyathelo okufanele uzilandele.
Uma ufisa ukushintsha ikhaya lakho, noma uma ufuna ukuphuma kumele unikeze okungenani i-2 ebhaliwe ebhalela i-BLI ngaphambi kokuphuma. Amaviki ama-4 okuqala ezindlu azibuyiswa.
Lapho usuqede uhlelo lwakho lokufunda, kulindeleke ukuthi ushiye ikhaya lakho. Uma ufisa ukwandisa ukuhlala kwakho, thintana nomnyango wezindlu ngokushesha futhi ubazise ngosuku lwakho ngqo lokuhamba.
Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi uma ubandakanyeka ekwephuleni kanzima imithetho yekhaya, uzobe usukhishwa kwikhaya futhi imali oyikhokhile ayibuyiselwa.
Inqubomgomo yokulwa nokuxhashazwa
Ukuqinela abanye inhloso ngamabomu yokulimaza umuntu ongenamandla okukuvimba. Ukuxhashazwa, ukuhlukunyezwa noma olunye uhlobo lokubandlululwa kuziphatha kabi futhi kuphazamisa ilungelo lomuntu lokuzizwa ephephile.
Yini ebhekwa njengokuqinela abanye?
Ukuqinela abanye kungathatha izindlela eziningi. Kungaba:
ubuso nobuso okubandakanya, ukulwa, ukusunduza, ukuthuka, amahloni, ukusabisa noma ukuhlasela isikhala somuntu.
emuva-emuva, njengokubhala imiyalezo esongela noma ecekisayo noma ukuthumela imiyalezo elimazayo noma ecindezelayo.
Ngokomzimba noma ngokwengqondo
Ukuhlukumeza ngokocansi, okubandakanya noma yikuphi ukuziphatha okungafuneki njengokuthinta ucansi, amahlaya noma imibono noma / noma ukwehlisa isithunzi somuntu.
Ukuhlukunyezwa ngokobuhlanga, kufaka phakathi ukuhlekisa, ukungabandakanywa emphakathini noma ukugconwa ngenxa yohlanga lomuntu.
Ngazi kanjani ukuthi ngiyaxhashazwa?
Ukuze ukuziphatha kuhlukaniswe njengobuxhwanguxhwangu, ukuziphatha okuphindaphindayo kufanele kuhileleke. Lezi zindlela zokuziphatha noma zenzelwa ukwenzakalisa. Ukungathandwa noma ukuthandwa noma ukungabi nabangane akusilo uphawu lokuxhashazwa futhi kungaba nje uphawu lokuntula amakhono akho. Ukuxhaphaza akuhlali kwenzeka ngabadala noma abakhulu. Noma ngubani angahlukumeza noma ngubani.
Izici ezibalulekile zokuxhashazwa ukuthi ziyaphindwa, zidala ubuhlungu nosizi futhi kubandakanya ukusetshenziswa kwamandla ngendlela engafanele.
Uma uyaxhashazwa, kubalulekile ukuthi ukhulume nomuntu ophethe. Kuhlala njalo kunomuntu ongafuna ukukusiza. Abanye abafundi abafuni ukubika ukuxhashazwa ngoba banomuzwa wokuthi kuzokwenza ukuthi ukuxhashazwa kube kubi uma isiqhwaga sithola. Kodwa-ke, lapha e-BLI, bonke abasebenzi baqeqeshwa ngezindlela ezizosiza futhi zivikele izisulu zokuxhashazwa.
Kunabasebenzi abaningana ongabatshela uma uzizwa ungakhululekile noma ungaphephile:
Umqondisi wesikole, umphathi wesikole
-receptionists, othisha, abaxhumanisi bezemfundo
Yenza into ye-RITE
Yazi ukuthi ngaso sonke isikhathi unelungelo lokuzizwa uphephile. Yazisa iziqhwaga okudingeka uziyeke. Tshela isisebenzi esisebenza kahle. Hlaziya isimo futhi uma kungabi ngcono, funa usizo olwengeziwe.
Uma usuqede ngempumelelo uhlelo lwakho lokufunda e-BLI sizokunikeza iSitifiketi Sokufezekisa esibonisa uhlelo owuthathile, kanye nezifundo ozifundile. Khumbula ukuthi ukuze uthole lesi sitifiketi kudingeka ukuthi udlule wonke amazinga akho ngesilinganiso esiphansi sebanga lama-70 futhi ungene okungenani kuma-80% wezifundo zakho.
Ekupheleni kwesifundo ngasinye uthisha wakho ngamunye uzokunikeza ibanga lakho lokugcina lesifundo sabo. Ngosuku lokugcina lweseshini ngayinye, futhi lapho usuqedile izifundo zakho e-BLI, uzothola umbiko wenqubekela phambili ohambisanayo ovela kumfundisi wakho wolimi. Uma kwenzeka udinga umbiko ohlanganisiwe ophrintiwe wawo wonke amaklasi akho, sicela uwucele amahora angama-48 ngaphambi komnyango wezemfundo.
Uma usicelile, singanikeza incwadi ethi Utadisha e-BLI. Le ncwadi ikhombisa inani lezifundo ozifunde ngesonto, ubude bokufunda kwakho, imiphumela kanye nokubakhona kwakho. Ngiyacelwa ukuthi uyicele amahora angama-48 ngaphambi komnyango wezemfundo.
Ukukhanselwa nenqubomgomo yokubuyiselwa kwemali
Abafundi abafisa ukuhlehlisa ukuqala kwenkambo kumele bazise i-BLI kusengaphambili. Incwadi entsha yokwamukelwa izokhipha ikhishwa lokukhokhwa komfundi esikhishwa ngaphansi kwezinyanga ezingu-6. Abafundi abatadisha izinyanga ze-6 bazokhokhiswa u-$ 100 CAD.
Zonke izaziso zokukhansela kumele zinikezwe ngokubhala ngeposi, ngefeksi, noma nge-imeyili okusho ukuthi uhlose ukuhoxisa ohlelweni obhalisile. Ukubhaliswa kanye nemali yokubeka indawo yokuhlala akubuyiswa.
Uma umfundi ephoqelekile ukukhansela uhlelo lwakhe ngenxa yokulahla i-visa, ukubuyiselwa kwemali ephelele kuzobuyiselwa ngaphandle kwemali yokubhalisa kanye nemali yokubeka indawo yokuhlala. Qaphela ukuthi i-BLI idinga ukuthola incwadi yaseCanada yokuqala yokwenqaba.
Abafundi kumele bawele ngaphansi kweziqondiso ezilandelayo ukuze bafaneleke ukubuyisela:
Ngaphambi kosuku lokuqala kohlelo
a) Ngaphansi kwezinsuku eziyi-10 ngemuva kokufaka ukubhaliswa kwakho · 100% yemali yokufunda.
b) izinsuku ezingama-31 noma ngaphezulu ngaphambi kokuthi uhlelo luqale · 70% yemali yokufunda.
c) Uma umfundi ekhansela ngaphansi kwezinsuku ezingama-30 ngaphambi kosuku lokuqala kohlelo · 60% yemali yokufunda.
Ngemuva kokuqala kohlelo lohlelo
a) Phakathi kuka-1-10% wohlelo · 50% yemali yokufunda.
b) Phakathi kuka-11 - 24% wohlelo · 30% yemali yokufunda.
c) 25% noma ngaphezulu kohlelo · 0% wemali yokufunda.
Abafundi bangathuthukisa kodwa bangahlehlisi uhlelo lwabo. isib. Uma umfundi efuna ukushintsha kusukela ohlelweni olugcwele isikhathi esizayo kuya ohlelweni lwesikhathi esithile, uzodinga ukukhansela uhlelo futhi asebenzise kabusha. Inqubomgomo yokukhansela izosebenza.
* Uma umfundi efika eCanada ngemvume yokutadisha i-BLI, ulahlekelwa ilungelo lokubuyiselwa kwemali yonke.
Ukubuyiselwa kwemali yasekhaya
Inkokhelo yokubekwa kwezindlu zasemakhaya ayikhokhwa imali. Abafundi kumele banikeze amasonto e-2 isaziso ngokubhalela umxhumanisi womndeni uma befisa ukushintsha indawo yabo yokuhlala. Amaviki okuqala we-4 wezindlu zokuhlala abuye abuyiselwe.
Isikhathi sokubuyiselwa imali
Uma efaneleka ukuthola ukubuyiselwa kwemali ngaphansi kwezimo ezingenhla, uzobuyiselwa phakathi nosuku lwe-45- ukusebenza ngemuva kokuthola isaziso esibhaliwe sokukhansela.
Sicela uqaphele ukuthi imali yokubhalisa kanye nemali yokubeka indawo yokuhlala ayibuyi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo.
Sicela uqaphele ukuthi imbuyiselo izokwenziwa kuphela kumuntu ofanayo owenze inkokhelo. Uma wenze inkokhelo yakho nge-ejensi, i-ejensi kufanele ikucelele imbuyiselo.
Ukubuyiselwa kwemali kuzokwenziwa ngendlela efanayo nenkokhelo etholwe ngayo. Uma inkokhelo yenziwe Ngokheshi noma ngesheke, inani elizobuyiselwa lizofakwa ku-akhawunti yakho yasebhange. isb. Uma ukhokhe ngekhadi lesikweletu, ukubuyiselwa kwemali kuzokwenziwa ekhadini lesikweletu olisebenzisa ukukhokha.
1) Isikole (esibizwa nangokuthi "thina", noma "thina" ngaphansi kwale Nqubomgomo) senze le nqubomgomo ukuze sikhombise ukuzibophezela kwethu kubumfihlo nasekuvikeleni imininingwane yakho, imininingwane ngokuhambisana nemithetho yangasese yamanje. Sicela ufunde le nqubomgomo ukuze uqonde ukuthi imininingwane yakho yangasese izophathwa kanjani.
2) Isikole siqoqa imininingwane ngezindlela eziningi. Eminye imininingwane yomuntu iqoqwa uma ubhalisa nathi. Ngesikhathi sokubhalisa, isikole singacela imininingwane yomuntu siqu efana negama lakho, ikheli le-imeyili, ubulili, ikhodi ye-zip / yeposi, umsebenzi, imboni nezintshisekelo zakho.
3) Singakucela imininingwane yomuntu ngaphandle komongo wokubhalisa, kufaka phakathi (kepha kungagcini lapho) lapho ulanda ifayela (njengefayela le-.PDF) esikoleni; lapho usicela ukuthi sikuthinte; lapho ujoyina uhlu lwethu lokuposa; futhi uma ubika inkinga ephathelene nezinsizakalo esihlinzekile noma izifundo esihlinzekiwe. Uma usithinta singagcina irekhodi laleyo imbalelwano.
4) Lapho abafundi abazoba yizitshudeni, okusho ukuthi abazovotelwa basinikeza imininingwane efana negama labo, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, kanye nekheli le-imeyili, sisebenzisa lolu lwazi lokuxhumana ukuthumela laba bantu abafuna ulwazi olwengeziwe mayelana nesikole ne-BLI, Bouchereau Lingua International. Imininingwane yokuxhumana nomuntu ongenela ukhetho ingahle isetshenziswe yithintane nathi ngqo. Abavunyelwe bangakhetha ukungatholi okuthunyelwe okuzayo noma okunye ukuxhumana okuvela esikoleni nganoma yisiphi isikhathi ngokwazisa umxhumanisi weZemfundo
5) Ngeke sigcine noma sigodle ipasipoti Yabafundi Yomhlaba wonke, Imvume yokufunda, noma idokhumenti elifanayo ngaphansi kwezimo.
6) Ngeke sithengise noma siqashe imininingwane yakho kubantu besithathu ngaphandle kokuthola imvume ebhaliwe ebhalwe phansi. Ngokuvamile, isikole asithengisi noma siqashe imininingwane yomuntu siqu kunoma yisiphi isenzakalo.
7) Iwebhusayithi yesikole ihlinzeka ngemininingwane eminingi ethatha izihloko eziningi. Ngenkathi isikole sizama ukuhlinzeka ngemininingwane efanele kubasebenzisi besayithi yayo, ayinikezi iziqinisekiso maqondana nokunemba noma ukuthembeka kwalokhu okuqukethwe. Iwebhusayithi yesikole kanye / noma yikuphi okuqukethwe ku-inthanethi okuhlobene nesikole, akusona isivumelwano noma isithembiso esivela esikoleni sabasebenzisi baso, kungaba abafundi abazoba abafundi, abafundi, noma ngenye indlela.
8) Iwebhusayithi yesikole inezinyathelo zokuphepha nezokuphepha ezikhona zokuvikela ekulahlekelweni, ukusetshenziswa kabi, kanye nokuguqulwa kolwazi olungaphansi kwethu nganoma yisiphi isikhathi. Kodwa-ke, njengoba kungekho ukudluliswa kwedatha kwi-Intanethi okuphephile ngokuphelele ngeke sikwazi ukuqinisekisa noma ukuvumela ukuphepha kwanoma yiluphi ulwazi oludlulisela kithi noma maqondana nemikhiqizo noma izinsizakalo zethu eziku-inthanethi, futhi lokho ukwenze ngengozi yakho. Lapho sithola ukuthunyelwa kwakho, senza yonke imizamo yokuqinisekisa ukuthi igcinwa iphephile nathi. Kufanele futhi ube nesibopho sokugcina imfihlo yamaphasiwedi wakho kanye / noma noma yiluphi ulwazi lwe-akhawunti.
9) Singagcina futhi kwesinye isikhathi silande imininingwane ngawe. Lokhu singakwenza ukuqhubekisela phambili amawebhusayithi ethu noma amafomu online, noma ukusisiza ukuthi siqonde ukuthi ngubani ongaba nentshisekelo ezinhlelweni zethu.
10) Ngokuncike kunoma yikuphi ukukhululwa okusemthethweni okuzovumela ukuthi sidalule imininingwane yakho njengoba kudingeka, ngeke siveze imininingwane yakho ngaphandle kokuthi uma imvume yakho inolwazi. “Imininingwane yomuntu” ichazwa kabanzi ngumthetho olawulayo njenganoma imiphi imininingwane ngomuntu okhonjwa ngaphandle kwegama, isihloko, ikheli lebhizinisi noma inombolo yocingo yasehhovisi yesisebenzi senhlangano.
11) Ngokuphishekela ukuxolelwa okuvumelekile ngaphansi komthetho wamanje, singadalula imininingwane yomuntu siqu lapho sinesizathu sokukholelwa ukuthi ukudalula lolu lwazi kuyadingeka ukukhomba, ukuxhumana, noma ukuletha izinyathelo zomthetho kumuntu ongase wephule inqubomgomo yesikole, wephule noma yimuphi umthetho wesifundazwe wase-Ontario noma eCanada, noma kungenzeka ukuthi kudala ukulimala noma ukuphazanyiswa (ngamabomu noma ngamabomu) amalungelo wesikole noma impahla, abanye abafundi noma amalungu eqembu lobuhlakani, noma omunye umuntu ongahlukumezeka ngemisebenzi enjalo. Futhi singadalula imininingwane yakho enhlanganweni yokuqoqa izinto ngenhloso yokuqoqa ngokusemthethweni isikweletu sakho osikweletayo.
12) Umgomo wethu maqondana nokusetshenziswa, ukuqoqwa, ukugcinwa, nokudalulwa kwawo wonke amarekhodi abafundi kulawulwa ngumthetho wobumfihlo osebenzayo kanye nezinhlinzeko ezifanele zezinye iZenzo nemigomo efanelekile.
13) Senza yonke imizamo ukubuyekeza ngezikhathi ezithile inqubomgomo yethu Yobumfihlo ukuze ihambisane nemithetho yobumfihlo ebusayo, kanye nanoma yimiphi imigomo esebenza lapho.
14) Isikole futhi silandela noma yimiphi imithetho ephathelene nenqubomgomo yokuqashwa kwevidiyo. Ukufingqa, ngezinga elisebenzisa noma elizofuna ukusebenzisa ukubhekwa kwevidiyo, isikole sizokwazi
(a) qinisekisa ukuthi kunenhloso evumelekile yebhizinisi yokuqapha;
(b) afune ukugwema ukuthwebula izithombe zabantu abangahlosiwe ngenhloso ethile, esemthethweni;
(c) ngangokunokwenzeka, funa ukungasebenzisi amakhamera ezindaweni lapho abantu benethemba elilindelekile lobumfihlo;
(d) ngangokunokwenzeka, funa ukwazisa abafundi nabanye abantu ngokusetshenziswa kwamakhamera ngaphambi kokuba labo bantu bangene kuleyo ndawo;
(e) ngokuya ngesizathu esithile somthetho sokugodla futhi ngaphandle kokuthi idatha icekelwe phansi, inikeze ukufinyelela Kubantu Abazithombe Zabo Abathwetshulwe Ku-Videotape;
(f) imininingwane ibhujiswa kungakapheli izinsuku eziyi-14 kusukela ngosuku lokuthwebula
(g) aqinisekise ukuthi imishini yokuqapha ividiyo kanye namateyipu evidiyo avikelekile futhi asetshenziselwa izinjongo ezigunyaziwe kuphela;
(h) aqinisekise ukuthi lapho kugcinwa khona izithombe ezirekhodiwe, ukuthi zigcinwa endaweni ephephile enokufinyelela okulinganiselwe;
(i) izithombe ezirekhodiwe ziphethwe nguMnyango Wezobuchwepheshe.
15) Isitshudeni sikhipha iSikhungo futhi sinikeze imvume yokuthola ilayisense futhi sisebenzise zonke izithombe nokuqoshwa kwemisindo kunoma iyiphi imidiya futhi nganoma iyiphi injongo. Isitshudeni siyavuma ukuthi iSikhungo sinamalungelo onke ezithombe nokuqoshwa kwemisindo unomphela. Lesi sivumelwano asinakuguqulwa, umhlaba wonke futhi asiphikiswa.
16) Uma kufanele ube nombuzo noma ukukhathazeka ngeNqubomgomo yethu Yokubhekwa Kwemfihlo Namavidiyo noma izindlela zethu kulokhu, sicela uxhumane noMphathi weSikole.